Ka soo qaad AutoCAD 2009 lacag la'aan ah - Geofumadas
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
AutoDesk ayaa ku dhawaaqay awood u lahaanshaha si aad u soo buuxiso naqshad buuxda oo ah AutoCAD 2009 Raptor iyo AutoCAD 2009 LT.
Noocani wuxuu u shaqeynayaa maalmaha 30, laga bilaabo maanta 25 March ee 2008, hab ay u isticmaalaan dadka isticmaala shaqooyinka cusub ee version 2009.
Waa maxay AutoDesk waxay arinkan ka raadinaysaa:
1 Sii baaritaan dadka isticmaala cusub
Ardayda aadka u jecel, oo leh aaladda 'Ipods', astaamohooda Hi5! iyo qaab nololeed ku tiirsan Twitter-ka ayaa ah musharixiinta ugu horreysa ee AutoDesk ay raadinayaan, si ay ula qabsadaan qaabkooda cusub. In kasta oo ay ardaydani leeyihiin noocyo bilaash ah haddii ay leeyihiin koonto email ah oo aan qarsooneyn, iyo inta kale ee budhcad-badeednimada ah liisamada ... iyagu waa macaamiisha mustaqbalka ee wax soo saarka Sannadaha tiknoolajiyadaada 25.
Haddii aad haysato koonto jaamacadeed, waxaad iska diiwaangelisaa oo aad ka heli kartaa AutoCAD halkan
2 Isku day inaad ku qanciso gaalada
Dhinacyada sida aadka ah u dhaleeceeyay tirada dadka isticmaala khibrada leh ayaa ah ku adkaysiga AutoDesk ee hal-abuurnimada shantii sanoba mar iyo isla markaana gelinaya isla barnaamijkan qiimo aad u sareeya oo u baahan kayd badan oo xusuusta ah ... kuwaas oo dhawr maalmood saameynayay waxqabadka muuqaalka. Halkii AutoCAD ay noqon lahayd sida Office 2007 iyo Windows Vista, qaar badan ayaa doorbidi lahaa inay horumariyaan awoodda wax ka qabashada, maaraynta rasterka iyo 3D.
3 Raadinta kooxaha tartamayaasha adag
Labadii sano ee la soo dhaafay, oo Microsoft iyo Yahoo ay arkeen in ay ku guul dareysteen tartamayaasha cusub iyo kuwa waayeelka ah ee ay ku guuleysteen in ay ku noolaadaan waxay sababeen AutoDesk inay raadiyaan inay ku soo noqdaan weerarka iyada oo la adeegsanayo hubkii ugu fiicnaa: burcad-badeednimada waddamada aan hagaagsaneyn oo ay ku faani lahaayeen dalal ka mid ah. Taasi waxay kuu anfacaysaa adiga oo ah qarash lama huraan ah oo ka imanaya shirkadaha khatarta ah ee ku yaal California laakiin qadar aan la heli karin oo ku saabsan isla shirkadaha halista ah ee Quito ... maahan inaysan u qalmin, laakiin in qurxintaadu ay soconayso hal sano oo keliya.
Aan hore u dhicin, AutoDesk ayaa Bentley siisay dharbaaxo hoose, Qaadashada khayraad qiimo leh naqshad casri ah; inkastoo ay doonayso in ay la dagaallanto dhulalka geospatial ESRI, kuwaas oo wakhti wakhti xaadirka ah raadinaya inay hagaajiyaan daciifnimadooda ku jira daabacaadda vector.
Waa hagaag, a soo qaado qaybta tijaabadaâ € | iyo inay dhawrayaan oo forums Anonymous ayaa ku faana oo jabiyay qufulka ... iyo inkastoo our dhaleeceyn joogto ah, sii ahaan doono software ah si ay u ilaaliyaan jiritaanka in dhaqankan cusub ee technology CAD, image shirkadaha dheeraad ah (in uu leeyahay) ka shaqeynayaan in ( waxaan hagaajin karin).
Talooyin si aad u hesho:
Kala duwanaanshahan waxaa kaliya oo loo heli karaa in lagu soo dejiyo Maraykanka iyo Kanada. Sidaa daraadeed waa kuwan talooyin si aad u heshid haddii aanad ka sarreeynin Rio Grande:
Marka hore waa inaad isku daydaa adoo galaya cinwaanka Mareykanka ee saxda ah, iyo marka aad aragto isku xirka si aad u soo dejiso, haddii bixiyahaaga internetka yahay a dealer shirkad Waqooyiga Mareykan ah ama aad ka timid Cybercafé waad nasiib badan kartaa in ip-kaaga uu ku muuqdo meel ku taal Mareykanka. Waxay igu dhacdaa inaan u muuqdo inaan ahay isticmaale Bismark ... ka dibna soo degsigaaga ayaa shaqeynaya maxaa yeelay nidaamku wuxuu kuu tixgelinayaa inaad tahay isticmaale gringolandia.
Waa in aan, sitema wuxuu kuu sheegi doonaa in aan la heli karin si ay u soo dejisan for "dalalka qaar ka mid ah", si aad fursad u haystaan ​​in ay xafiiska boostada aad timid wakhtigaas tago oo codsan kale in ay kuu soo diri DVD ama CD. In kiiskayga ayaan taas u isticmaalo iyada oo ah "sanduuqa mail" ama "aerocasilla" kuwaas oo ah kuwa adeegyada ay bixiyaan shirkado badan oo ku nool dalalka Hispanic, bixiya sanduuq jirka oo dalka Mareykanka ah.
Haddii aadan sameyn Karin ... Durbaba, AutoDesk waxay aaminsan tahay in dalkaaga loo siiyay burcad-badeednimada sidaas daraadeed maaha suuq balaadhan, sidaa darteed waxaad haysataa bedelka cinwaanka iimeylka jaamacadda, maadaama ay jiraan liisan ardayda.
Sidaas awgeed waxay ku xirnaan doontaa dalka aad joogto, isku day inaad halkan ka hesho
Post Previous«Previous Sidee loo dardar-galiyaa xawilaadyo waaweyn
Post Next Noocyo badan oo loogu talagalay AutoCADNext »
260 jawaabta "Download AutoCAD 2009 lacag la'aan"
Ardayda waxaa jira qeybta waxbarashada, taas oo dhamaystiran oo loo isticmaali karo sanadaha 3.
Adiguna waa inaad soo dejiso http://students.autodesk.com
Xaddidaadu waa in ay ku kooban tahay qaybo cusub, uma maleynayo inaad soo dejisan karto 2008 version
Camilo Cruz Colombia isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo raba inuu barto sida loo wado Autocad maaddaama aan ahay arday jaamacadeed waxaan jeclaan lahaa adiga oo ah shirkada noocaas ah in la siiyo ardayda suurtagalnimada lahaanshaha autocad ee ahayd 2008 ama 2009 iyada oo aan wax lacag ah lagu caawin Ardaydaas aad rabto inaad barato.
Waxaan waydiisanayaa haddii ay aad u fiicnaadeen in ay u soo diraan tan iyo markii aan u baahnahay shaqada dhirta
Haddii aad u qaadatid quutal-daruuriga, waad iibsan kartaa ItelliCAD, waxay kugu kici doontaa oo keliya US $ 300, oo aad runtii ku bixin karto shaqo ahaan. Waxay ku siineysaa isla adeegsiga, amarradu waa isku mid.
Oo sidaas ayaad u qaadataa masuuliyad ah inaadan ka takhalusin barnaamijka, taas oo qayb ka ah ujeedada laga leeyahay in lagu guulaysto mas'uuliyadda.
josemiguel isagu wuxuu leeyahay:
Waan ogahay in barnaamijkani yahay mid heer sare ah heer kasta.
Waxaan ubaahanahay, barnaamijka Autocad si shaqo loo helo si uu u taageeri karo mahadnaq
roodhiga agapito isagu wuxuu leeyahay:
Sare, waxaan ahay saxafi. Waxaan u muuqdaa mid aad u wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo qaadanno kombiyuutarkayga, ma haysto waayo aragnimo badan waxaanan doonayaa inaan barto, laga bilaabo Ciudad Guayana State Bolivar
Waa arrin aad u muhiim ah
Waxaan u maleynayaa in barnaamijkani yahay mid aad u xiiso badan, waxaan runtii jeclahay isticmaalka
Waxaan rabaa autocad
mahadsanid taageerada weyn
Alfredo Rosales Perez isagu wuxuu leeyahay:
weyn, laakiin sidee baan u soo dejisan karaa lacag la'aan?
ku dhaji agustin iñacasha quilumba isagu wuxuu leeyahay:
mahadsanid aad u badan ayaa noqon doona mid wax tar u leh machadka aan ku shaqeeyo
mohamed fatmi isagu wuxuu leeyahay:
sharaf weyn ayeyna ii tahay inaan ka soo dego barnaamijkan autocad, waa wax cajiib ah ma aqaan sida loo sharxo, waa riyo
Waad ku mahadsantahay aad u badan waxaa loo isticmaali doonaa wanaag
si gaar ah loogu talagalay xafiiska ariga
Fiidiyaha Lulu waa ikhtiyaar. Laakiin waa la siiyay, waxay mudan yihiin $ 15
Si aad u xiiso leh bandhigida iyo maareynta barnaamijka.
dilso moreno isagu wuxuu leeyahay:
marka ugu horeysa habeenkii oo dhan, waxaan ku faraxsanahay inaan kaa codsado fursad aad ku codsato fiidiyo si aad u hesho aqoon badan oo ku saabsan wadista.
Maadaama aadan fiirineynin Daily AutoCAD, waxaa jira layliyo badan oo 3D ah
Wendy isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa warqaddayda, wendy_laloka@hotmail.com, haddii qof i caawini karo waan ku qanacsanahay
Waxaan ubaahanahay caawimo ah autocad porfa i soo dir email iim ah, waxaan u baahanahay inaan qayb ka mid ah farsamooyinka ka sameeyo 3D
pos waa mie ... !!!
laakiin waa weyn, weyn
Arqlgo isagu wuxuu leeyahay:
aalad aad u faa'iido leh oo loogu talagalay nashqad
ING FRANCISCO isagu wuxuu leeyahay:
sidee baan u baran karaa in aan u isticmaalo Waxaan jeclaan lahaa inaan barto inaan ahay sarkaal sare laakiin waxaan doonayaa inaan barto sida loo isticmaalo
Barnaamijku waa mid wanaagsan waana mid waxtarka leh
saul isagu wuxuu leeyahay:
barnaamijka waa qabow
Mahadsanid, waxaan jeclaan lahaa in aan soo dejiyo autocad 2009 Waxaan jeclaan lahaa in aan naqshadeysto gurigeyga sidii aan kuugu soo dejin lahaa barnaamijka i caawiya porfas
Haddii aad doonayso inaad kiraysato si aad u safarto dalxiisayaasha qaar, maxaad sameyn laheyd?
-Waxaad garaacdaa baabuurka oo aad halkaas ku qaadataa
-Ku duub oo bixiso qandaraaska
-Ku daro muddada safarka
-Inaad internetka u dirto mid ka mid ah boostadaada
Arinta ayaa ah anshax xumo, iibinta adeeg waxay ubaahantahay masuuliyada fulinta fulinta balanqaadka, barashada AutoCAD wax ku ool ah waxay ubaahantahay anshax, bixinta tababarka iyo helitaanka softiweerka xitaa qiimo jaban. Taasi waa sida ganacsigu yahay, haddii aad rabto inaad iibiso adeegyada naqshadeynta, soo iibsato softiweer oo aad isaga ku bixiso adeegsiga aad heleyso sannadaha soo socda. Haddii aad u aragto mid qaali ah, waxaa jira noocyo fudud, noocyo kale oo qiimo jaban ah iyo sidoo kale barnaamij software furan.
Haddii ay tahay ujeedo waxbarasho awgeed, soo qaado sawir maxkamadeed, iibso shatiga ardayga ama jaamacadaadu ku siiso nuqul.
Blog-kani kuma caawin karo inaad khawano AutoCAD, kuma jiraan siyaasadaha lagu horumarinayo sharci-darrada. Waqti aad uga yar waqtigan waxaa jira habab kale oo anshaxeed oo lagu bixiyo adeegyo xirfadeed.
... Anigu ma burcad badeedda u siinayo dadka kale, haddii kale waxaan jeclaan lahaa in naqshadeynta naqshadaha ...
... haddii aan tayo aad u badan, iyo in ay iska iibiso aan hal-abuurka isticmaalka software sida AutoCAD: ma heli habboon tahay in hab si aad u hesho version ku jirta inaan xooggayga, iyo in ku haboon anshaxa aan tayo?
... haddii aan ogaado in aan maamuli karo AutoCAD iyo sidoo kale awoodda aan leeyahay, miyuu u qalmaa inay ku qanciso inay bixiso kooras fiican halkii kala badh waxbarasho?
ALBERTO COUTIÑO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku boorinayaa dhigaayo park biyo Chiapas ah, waxaan talinayaa autocad barnaamijka laakiinse anigu uma aan kala soo bixi kartaa, iga caawin kara download fariinta aad igu bixinayso ayaa si aan mail fadlan, waxaan ku boorrinayaa waxba 3 bilood si ay u bartaan si ay u isticmaalaan iyo 3 dheeraad ah si loogu gudbiyo leeyihiin iyo kharashka mashruuca, anigu waxaan ahay xisaabiye Bobliyos iyo Waxa aan ka shaqeeyey sidii plisssssssss qandaraasle
Hambalyo, magaceygu ​​waa Nestor, waxaan haystaa sanado 18.
alos 17 waxay qaataan koorsada autocad iyo inventor
Runtii waxaan jeclahay sawirka iyo abuurista shey.
laakiin markaan bilaabay inaan wax barto dugsiga mawduucan ayaa ka baxaya.
Dabadeed waxaan doonayaa inaan dib u soo kabto wakhtigii lumay iyo dib u habeyn mawduucan.
Waxaan rabaa in aan wax badan barto iyo sidaan hadda haysto 18 waxaan rabaa in aan ka shaqeeyo arrintan oo aan ku takhasuso shaqada noocan ah.
Haddii uu jiro qof iga caawin kara inaan dib ugu laabto shaqadan takhasuska ah oo waxyar iiga baro wax badan oo ku saabsan autocad iyo soo saare aniga ahaan waxay ii noqon laheyd inaan wax badan ka ogaado waxa aan jeclahay.
calsho-xanuun isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan doonayaa inaan ogaado sida loo soo dejisan karo autocad 2009, waxaan u baahanahay booska ugu dhakhsaha badan.
mario alberto herrera lopez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa ilaaliyaha gaari wadista autocad ee shaqada naqshadeynta
sida barnaamijka cad cad ee 2009 la soo dejiyey
By fa baahan Autocad2009 uu yahay mid aad muhiim iigu sababtoo ah ugu dhakhsaha badan waxaan ka baran bixinta Architecture iyo waxaan u baahan tahay, laakiin waxaan, oo anigu ma aan hoos u dhigi karaan, i caawi porfa waxaa Waxaan u mahadcelinayaa badan ... .. salaan Santiago ...
Fadlan u gargaartaan mar dambe ma soo bixi kartaa 2009 barnaamijka autocad ah sababtoo ah waa mid aad u faa'iido leh oo suuragal ah in la sameeyo dhismaha ama sawirada kale ee la xiriira naqshadaha fadlan caawin cm ayaan si ay u soo dejisan kartaa porfa haddii samayn
barnaamijku aad ayuu u fiican yahay sawirrada
jako isagu wuxuu leeyahay:
Aad ayay u wanaagsan tahay
Kuwani waa noocyada waxbarashada:
Autodesk AutoCAD LT 2009 Win DVD - Ardayga aan weligiis haysan U $ 148.95
Autodesk AutoCAD 2009 Win DVD - Ardayga Dhabarka ah $ Xirfadaha $ U $ 364.95
Ujeedada qiimeynta liisanka ganacsiga waxaan kugula talin lahaa arag boostan halkaas oo ay jiraan xiriiro kale oo ku saabsan kuwa ka shaqeeya waddankaaga.
Luis Toapanta isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan naga caawi kharashka autocad 2009
cad cad oo aad u fiican
June isagu wuxuu leeyahay:
banaantani waxaan jeclahay sida uu u shaqeeyo
rakibayo AutoCAD waa ka badan 1 GB, ma mail adeeg kuu ogolaanaya diraya files of size in.
Rodolfo Jim isagu wuxuu leeyahay:
miyaad u diri kartaa warqadkayga fadlan igu waanin
sidee baan u soo dejisan karaa autocat lacag la'aan ah?
fadlan ii soo dir sababta oo ah ma soo dejin karo oo si deg deg ah ayaan ugu baahanahay
Hola Como estan u baahan tahay in ay hoos u maalmaha 2009 autocad Waxaan haystaa in sidan si aan kala soo bixi kartaa baryayaaye, ii sheeg.
Alan Avila isagu wuxuu leeyahay:
shaakoow waxay ogtahay sida ay changos download hahaha
Anigu waxaan ku jiraa xaalad adag ... waana lagama maarmaan in la helo Autocad 2009.
Waad ku mahadsantahay adeegyadaada.
amadeo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan barto si aan u arko haddii aan soo dejiyo waqti
carlos cardozo isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan eegaa nidaam aad u fiican ama adeeg
alfredeo isagu wuxuu leeyahay:
barnaamijkani waa mid aad u wanaagsan
florin jorge isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan soo dejiyo autocad
Ama in malaa'igtaada ay aqbasho dirista faylka 1.4 GB
jenapierre cristian isagu wuxuu leeyahay:
oe waxaan rabaa inaan soo dejiyo autocat i nu anoo aan raalli ka ahay waan u soo diri karaa ami mesenger waxaan kaa baryayaa
Horey u soco, qofna ma hor istaago. Laakiin burcad badeedda barnaamijku waa jariimo aad u xoog badan oo la bixiyo. Haddii aadan arkin wixii ku dhacay Rapidshare ee oggolaanaya wadaagista waxyaabaha sharci darrada ah
MAGYY isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan qorsheyga si deg deg ah u sameeyo. si aan u hagaajiyo shaqadayda.
Waxaan doonayaa in aan horumariyo shaqadeyda
Gilbert isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in ay bartaan 2009 autocad, iyo in aan shaqada sawiro badan oo diyaarado loo sameeyaa, wadooyin inta badan ee dhismayaasha dhulka iyo beeraha.
Waan qadarinayaa inaan diro gacanta iyo software-ka.
koga isagu wuxuu leeyahay:
pssss aad u fiican aad u fiican waxa k keria
JOSE LUIS E. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay inaan soo dejiyo autocad si aan u barto habdhaqanka dugsiga
Mario Jesus Muñoz Angulo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay caawimaad si aan u soo dejiyo barnaamijka autocad ee daaqadaha
Waxaan u baahanahay inaan soo dejiyo barnaamij kaas oo ku habboon daaqadaha "window vista"
Barnaamij aad u wanaagsan .. aad u fiican ... waa wax aad u macquul ah oo wax badan ...
Fabian villanueva isagu wuxuu leeyahay:
aljandro muñiz sixtos isagu wuxuu leeyahay:
runtii waa barnaamij aad u fiican, sababtoo ah waxaad maamuli kartaa shaqooyinkaaga 3D
Nabada nabadgelyo isagu wuxuu leeyahay:
aad u fiican in shaqo lagu sameeyo 3d
BARNAAMIJKA waa run REASLMENTE aad u wanaagsan; EE AAN ANIGU WAXAAN AHAY ARDAYGA SANADKII LASOO DHAAFAY OF WAAWEYN KA SHAQEEYA MACALLINKA Tse No. 15 Fontana - tubooyinka, Xaqiiqaduna waxay tahay A BARNAAMIJKA aad u wanaagsan. MERESIDAS CONGRATULATIONS
efren mendoza isagu wuxuu leeyahay:
wanaagsan in doorashadan la heli karo barnaamijkan waa
aad ayey ugu fiican yihiin kuwa inaga mid ah oo jecel sawirka
Porphyry Carmona isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa herramienta.Gustaria fiican ii soo diri barnaamijka Auto Cad 2009 aan mail, waxaan isku dayay inaan u soo bixi aan computer, laakiin waxaan lahaa hore u mahad naqayaa natiijada satisfactorio.Desde
Juan Diego isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa cajiib ... oo ah injineernimo mustaqbalka
kuwa aan macaamiisha ahayn ee aan macaamiisha ahayn
maya mama waan jecelahay autocad waxaan ku dhaaranayaa hahaha
Dulce isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u soo dejin karaa AutoCad2009 ...
Waxaan u baahanahay mashruuc kama dambeys ah ...
JULIO CESAR SOTO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay inaan awood u yeesho inaan soo dejiyo iyaga, mar walbana waan ku bilaabi doonaa mustaqbalka xirfadeed ee dhismaha - aad ayaad u mahadsantihiin
Waxaan u baahanahay inaan soo dejiyo barnaamijka deg-dega ah ee AutoCad 2009 ama nooc kasta oo xero ah, esque aan haysto oo aan ka tirtiray markii aan computer-ka dib u tarjumay. Waxaan baranayaa barnaamijkan si aad u fiican, mahadsanid aad u badan.
Waxaan u baahanahay autocad maadaama aan heli karo bilaash
Hendry Martinez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inay tahay nooca ugu fiican ee la sii daayay
Waxaan ubaahanahay autocad ii soo dir, mahadsanid
ronald soda isagu wuxuu leeyahay:
Ma aqaan sida aan u soo dejisan karo laakiin waxaan joojiyay barnaamij wanaagsan
PEDRO MARCELO VARGAS isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay aad iigu soo dirto, waan u adeegayaa
Waxaan u baahanahay inaan si deg deg ah u soo dhigo autocad 2009, fadlan ii sheeg sida ay, mahadsanid.
Waxaan rabaa inaan arko qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay qaabeynta qorshayaasha
Waxaan la shaqeeyaa Autocad waxaanan jeclaan lahaa in aan isku dayo qalab badan oo saaxiibtinimo leh oo dhakhso ah si aan u tijaabiyo qaabkan cusub
Antolin Arturo isagu wuxuu leeyahay:
sideen u helayaa autocad 2009 shabakada iyada oo aan wax kharash ah?
sida hoosta xakamaynta 2009
Waxaan ka helaa xiiso in autodesk ay isbeddeshay sanooyin kasta 3
Cinwaankan waxaa suurtagal ah in la helo qaybta bilaashka ah ee ardayda
MARLON isagu wuxuu leeyahay:
Aniga waxaan ahay arday. mujtamaca iyo waxaan xiiseynayaa autocad 2009, fadlan sida loo soo dejiyo iyo qiimaha ay ku kacayso. Waxay u muuqataa in ay aad u buuxsamayso
Ruben Oscar isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan haystaa 2008 CAD. Waxaan xiiseyn lahaa in aan ogaado waxyaabaha ku jira si aan u cusbooneysiiyo
rosendo cardenas martinez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in ay leedahay doorasho wanaagsan oo lagu hirgelinayo baakooyinkan internetka ee loogu talagalay dhammaan isticmaalayaasha kuwaas oo xiiseynaya naqshad casri ah si ay u cusbooneysiistaan ​​naftooda bartamaha waxa aan nahay
Hi Freddy, shuruucda blogkan ma ogola in la wareejiyo badeecadaha la daabacay.
Suuragalna ma ahan in qof uu kuugu soo diro faylka cabirkaas emayl ahaan. Waxaa ugufiican inaad raadsato hab aad ku rakibto barnaamijkaaga, laga yaabee inaad la aqriso dvd dibedda ah ama qalab kale oo uu dvd ku shaqeynayo.
Salaamaha la shaqayn jiray lihina in dabcan ka mid ah muuqaalka guud ee dhulka oo i soo sharaxo fikradaha qaar ka mid ah autocad oo xiiso aniga iyo comense in uu akhriyo buug halkaas oo ay howlgalka sharax sidii codsiga iyo aad uga fiirsada progarma fiican baan soo iibsaday jeer 2 progarma ah 2006 ah laakiin marnaba ma shaqeeyaa sababtoo ah waa aniga iyo akhristaha DVD akhriya waxa ay noqon doontaa suurto gal ah in soo diro ayaa i soo diri ee 2009 autocad
Waa wax cajiib ah sida kuwa haysta e-mail halkaas oo ay ku heli karaan faylka 1.4 GB
Robert Yanangómez P. isagu wuxuu leeyahay:
Barnaamijka waa mid aad u wanaagsan, hadda waan u baahan tahay inaad kala soo baxdo mid ka mid ah in la sameeyo qaabeynta ah sida anigoo goor shaqada aan u fududeeyo doono iyo waqtiga badbaadiyo laakiin waxaan ii ma soo diri kartaa sidee baan u soo bixi?
Raul Wenceslao Ajxup isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay injineer madani ah, waxaan u baahanahay autocad 2009, ma rakibi karo, fadlan ii soo dir boostada. waad ku mahadsantahay
i caawi, waxaan u baahanahay autocad 2009 Ingiriis si deg deg ah!
Qof kasta oo haysta oo ii soo diraya waan kuu mahadcelinayaa.
ismael isagu wuxuu leeyahay:
hello waxaan rajeynayaa inaad iga caawiso soo degsashada fadlan mahadsanid
IGNACIO ARZATE isagu wuxuu leeyahay:
Hello POEDAN ME Waxaan rajeynayaa in si loo soo dajiyo FREE AUTOCARD 2009 CAAWIN maxaa yeelay, waan ku rakiban kartaa in ay aad u adag tahay ME. Waad ku mahadsan tahay
waa barnaamij aad u wanaagsan oo aan jeclahay mashaariicda
hello Waxaan rajeynayaa in aan helo barnaamijkan sababtoo ah aad bay iigu muhiim ii tahay baaritaanka aan sameeyo. Aad ayay u fiican tahay mana iibsan karo. waad ku mahadsan tahay
jhonny alexader isagu wuxuu leeyahay:
iyagu waa md maxaa yeelay kaliya gudaha usaulka iyo gudaha canada ayaa soo dejisan kara barnaamijkaan maxaa yeelay ptas nil waxay kaliya awood u siisaa Paisis kale waxaan ka ahay mexica horale pinches bastards
Fefru isagu wuxuu leeyahay:
maxaad aabbe tahay?
hipolita isagu wuxuu leeyahay:
Waa barnaamiji aad u fiican
Waxaan rabaa inaan soo iibsado autocad 2009
aadapa isagu wuxuu leeyahay:
sida ay u qabow u shaqeyso
luis gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
Kama qaadi karo autocad
jd isagu wuxuu leeyahay:
waa tan ugu fiican
ORLANDO TORRES MEDINA isagu wuxuu leeyahay:
BARNAAMIJKA BUUXINTA WAXAAD U BAAHAN TAHAY WAXYAABAHA LAGA HELAY KOOXAHA KOOWAAD
Fabio marsiglia isagu wuxuu leeyahay:
Ma aqaano wax sababtoo ah ma aanan soo dejin
Zero isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan qaatay saacad aniga oo aanan helin qaybta tijaabada ee qof i caawiya iyo hadii ay tahay CAD-kooda ugu caansan mar walba hagaajinta
Rafael Almeida .. !! isagu wuxuu leeyahay:
Waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waxay ku xiran tahay waqtigaaga xorta ah .. !!
mario kain resendiz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan u sahlanaado in la soo qaado buugga, laakiin autocad aad bay noo fiican tahay annaga oo baraneysa
ROYED isagu wuxuu leeyahay:
BADAN BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA
KA HELI KARTAA WAXQABADKA SHARCIYADA SUUQA.
Hello waxaan ka Venezuela la autocad shaqada ka version 12 waayo, MS-DOS iyo UNIX qoro, iyo tijaabiyey oo dhan versions laakiin waxaan u arkaa in ay adag tahay in la qabsado 2009 ama e awoodaan in ay 2007 xafiiska ahaan nidaamka menu ugu weyn isla laga yaabaa in u baahan tahay in la beddelo Nasiib darro, waxa aan u ahaa r12, r14, 2000, 2005 iyo 2008 si aan u arko salaan caddaan ah ......
Laura: Xeerarka blogigan ma oggol yihiin inay ku wareejiyaan software-ka sharci-darrada ah.
Angie, Aide, boostada ayaa muujinaya xiriirka aad ka heli karto AutoCAD, laakiin waa inaad ku jirtaa Mareykanka ama Canada, kuwaas oo ah waddamada loo ogol yahay inay soo qaadato imtixaanka.
Alex, AutoCAD waxay u baahan tahay shuruudaha aad ku rakibtay nidaamka .net, oo aad ka soo dejisan karto bogga Microsoft.
Gargaarka Gargaarka isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u soo dejisan karaa bilaash si aan u tijaabiyo?
hello sida aan u soo dejisan karo iyo haddii ay xor u tahay inaan u tababaro qaar caddayn ah
Magdalena Azcorra hdez. isagu wuxuu leeyahay:
LAURA YESSICA isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan ahay arday injineerinka madaniga ah iyo in kastoo aan anigu ku cusub ahay waxaan la yaabanahay haddii qof iga gudbi karo XCX autoCARD, mahadsanid!
.NET lama rakibo.Mutocad 2009 kuma xirmi karto qaybtaan la'aanteeda. Ma u arag syste maamulaha syste macluumaad dheeri ah oo soo baxa oo aanan ku rakibi karin
Waa arrin aad u faa'iido leh, markaa waxaan go'aansaday inaan soo dejiyo mahad
argemiro isagu wuxuu leeyahay:
waa barnaamij fiican, qalab asaasi ah oo naqshadeynaya
Juan Javier Mendoza isagu wuxuu leeyahay:
Waa arrin aad ii faa'iido leh tan iyo markii aan ahay injineer madani ah, waxaanan ku dadaalayaa inaan dhiso, waxaana doonayaa inaan cusbooneysiiyo
AJ CZ isagu wuxuu leeyahay:
barnaamij wanaagsan oo aan jeclahay
reynaldo vera isagu wuxuu leeyahay:
Aynu rajeyneyno inuu shaqeeyo
Pedro Perez isagu wuxuu leeyahay:
Waan ku fiicnahay barnaamijka
Waan fahamsanahay Javier xumaa, laakiin haddii aad si taxadar leh u akhri waa cad, haddii aad ku nooshahay Kanada ama Mareykanka aad ka soo dejisan karto.
Ma sharrixi karo sababta ay waqtigaaga u lumiyeen markii ay yiraahdeen waxaad soo dejisan kartaa bogga bilaashka ah mana u egtahay. Noqo mid khatar ah.
marcos hereldo camacho isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa in aan lacag la'aan ku soo iibsado autocad 2009 gacmaha
oswaldo almazan p. isagu wuxuu leeyahay:
hello waan ku faraxsanahay waxa aan sameeyo si aan u helo mahad celinta autocad
hernan sanchez isagu wuxuu leeyahay:
hello sida aad u baahan tahay inaad i hagto si aad u soo iibsato autocad 2009 mahad u leh dhageysiga
Daabacaadyadani waa mid aad u wanaagsan
Waxaan fahamsanahay inay dad badani xiiseeyaan soo dejinta AutoCAD, xaddiga faallooyinka ku jira qoraalkan ayaa sidaas leh. Waa inaan caddeeyaa in qawaaniinta xakameynaya balooggan aysan ogolaanaynin inay sharxaan sida loo soo dejiyo barnaamij sharci darro ah. Sidii aan horay u sheegay, waxaa jira barnaamijyo sida Vuze oo loogu talagalay soo dejinta waxyaabaha ka soo baxa webka.
Haddii lagaa soo dejiyey Vuze waa sharci ama sharci darro, waa mas'uuliyadda isticmaalaha adeeggan.
byron isagu wuxuu leeyahay:
Dhamaanteena annaga oo qora boggan codsigeyga ah si aan u soo dejinno autocad 9, waxaan noqon doonaa mid aad u mahadcelin
Waan ogahay wax walba oo noloshu ayan ahayn bilaash laakiin waan jeclaan lahaa wax walba
Aniga waxaan dad ku kalsoonahay inaan u ogolaado inaan macluumaad u hayo
si ay u awoodaan inay soo dejiyaan barnaamijkan oo aad u muhiim ah
shaqadayda iga caawisa inaan ku guuleysto mahadnaq dad badan oo dhan
kuwa ila shaqeeya
Lupita ochoa de villegas isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa sahlan tahay in la xakameeyo, laakiin ma aan soo dejisan karo, haddii aan runtii u baahdo, shaqadayda, waan ku faraxsanahay inaan arko yaa i soo diri kara macluumaad ku saabsan sida loo soo dejiyo barnaamijka.
ii ogolow inaan soo dejiyo barnaamijka lacag la'aanta ah maxaa yeelay waxaan u baahanahay isagu wuxuu leeyahay:
waa muhiimada aad u leedahay inaad soo dejiso barnaamijka
Waxaan ahay JADWEYNE WAXAAD KA HELI KARAA WAXA LAGA HELI KARO WAXAAN LEEYAHAY LACAG HADDII
qaadataa osorio isagu wuxuu leeyahay:
Su'aal sir ah, kama hadalno qoraaga maalmahaaga
suaalaha ugu fiican isagu wuxuu leeyahay:
Waa qof xishood leh oo aan cidna doonaynin giligga d **** **** ****
Isku dey vuze
sidee baan u heli karaa autocad 2000
arturo isagu wuxuu leeyahay:
padricimo this ok
birta isagu wuxuu leeyahay:
Ibrahim isagu wuxuu leeyahay:
waxay u muuqataa mid iigu wanaagsan, in bulsho ahaan la baro barnaamijyadan
Isku day inaad isticmaasho Vuze
aleyda heron isagu wuxuu leeyahay:
hey anigu waxaan rabaa in aan soo iibsado autocard 2008, laakiin ma aqaan sida loo soo dejiyo
iyo vd haddii aan u baahanahay, sidee baan u samayn karaa?
yessica isagu wuxuu leeyahay:
Waa wax aad u wanaagsan inaan jeclaado in aan wax badan barto. waad ku mahadsan tahay
Waxaan ugu baahanahay nidaamyada damiya dabka
rubencano isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo 'autoacad' cusub, maxaa yeelay waxay iga codsadaan inaan awood u yeesho in aan ku bilaabo qaar ka mid ah dhaqamada oo waan ku waalanahay inaan helo.
Waad ku mahadsantahay horay, waxaan sidoo kale weydiistaa wax isku mid ah
barnaamijkan farxadda leh waa qalab fantastik ah oo nagu leh naqshadeyaalku wuxuu ku siinayaa wax la yiraahdo xaqiiqda dhabta ah, oo aad la wadaagto inaad sheegto waxa aad maskaxda ku hayso
Autocad waa qalab fiican oo loogu talagalay lamaane
Juan Antonio Mora isagu wuxuu leeyahay:
autocad waa qalab aasaasi ah oo loogu talagalay ujeedka naqshadeynta maaddaama ay noo ogolaato in aan u dhawaano xaqiiqada wax ku biirinta.
Waxaan jeclaan lahaa in aan noqdo maalin Agung a aruitecta Waxaan ka qalinjabiyaa dugsiga waxaanan aadi doonaa Jaamacadda waxaan doonayaa inaan noqdo dhismaha, waxaan jeclaan lahaa inaan barto autocad
Barnaamijkani waa mid aad u wanaagsan waana mid aad u faa'iido leh injineeriyeyaasha iyo sidoo kale dhuxusha
samuel saban isagu wuxuu leeyahay:
Waa barnaamij aad u fiican oo si fiican u shaqeeya
Hello Angel, Waa kuwan liiska qiimaha.
Inkasta oo ugu haboon yahay in bogga AutoDesk raadso soo-saaraha wadankaaga iyo qiimaha qiimaha tooska ah la soo qaado.
vergara angel isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay qiimaha uu barnaamijka autocad 2009 ku leeyahay Isbaanishka.
Waxaan ahay naqshad, Waxaan rabaa inaan 4 u sameeyo barnaamijka autoconta 2009 ee Isbanishka, in vaolr uu leeyahay
waa mid aad u wanaagsan
autoCAD waad ku mahadsantahay dhibaatada aad qaadatay si aad u soo dejiso sem sem Ma shaqeyn karo mahadsanid
Waxaan rabaa inaan tijaabiyo 2009 autoCAD oo ku raaxaysta
Hilas baaritaankii Autocad 2009 oo waxaan samayn karnaa qorshayaasha jaranjarada oo waxay ka soo baxday diyaaradda
Navdel isagu wuxuu leeyahay:
ka caawi dhammaan kuwa aad u fiican ee barnaamijkan Waxaan doonayaa in aan ogaado marka barnaamijka laga soo galo shabakada oo ay ku leeyihiin pc sida aan u dhaqaajiyo haddii aan garanayo codsiyada kicinta ama tan waxaa lagu daray download haddii ay sidaas tahay Waxaan jeclaan lahaa qof inuu u sharaxo aniga ii mahadnaqaya qaadashada dhibaatada
IYO WAXA MUHIIM AH OO MUHIIM AH HADDII AAD KA HELI KARTAAN WAXAAN KA HELI KARAA WAXA LAGU QAADO WAALIDIIN KA BADAN YAHAY BUUXINTA BUUGA BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA
aaaa isagu wuxuu leeyahay:
Kama soo bixi karo
Dir? AutoCAD 2009 ayaa miisaankeedu yahay 1.34 GB ...
remigio isagu wuxuu leeyahay:
Software waa in uu ka fiican yahay qoraaladii hore, gaar ahaan 3D
ii soo dir barnaamijka 'autocad 2009', ma soo degsan karo
MAGAALADA isagu wuxuu leeyahay:
ARMANDO ESPINOSA isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado halka aan ka soo dejisan karo cadawga bilaashka ah, laakiin waxaan u fududeynayaa tan iyo markii aan isku deyey dhowr goobood mana aanan soo dejisan karin
halkaas oo aan ka heli karo autocad 2009 bilaash ah iyo in ay fududahay in la soo dejiyo sababtoo ah waxay isku dayeen in ay soo dejiso meelo kala duwan oo ay aad u adag tahay
ADA isagu wuxuu leeyahay:
qof i caawin kara .. oo ii sheeg sida loo soo dejiyo autocad 2009 ..
Waxaan u baahanahay si deg deg ah ..
Arming Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay barnaamij si aan u dhiso waddooyin iyo jidad aan u isticmaali karo sawir
in ****** uu yahay mid aan faa'iido lahayn, tirtir dhammaan xayeysiiska kuwaas oo ah ********
Waxaan rabaa autocad 2009, maxaa yeelay waxaan ahay arday naqshad leh ...
Richard O. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan Autocad 2009 sababtoo ah waxaan jeclahay jihooyinka sawirrada iyo in aan hadlo shey
HERNANDO MOLANO isagu wuxuu leeyahay:
MAS'UULIYADDA CINWAANKA SENCE 90 IYO WAXAAN OGAANAYAA HABRAACIDA HORUMARINTA BARNAAMIJKA .... HADDII WAXBARASHO BARNAAMIJYADA CAD QORAAL AH - WAXAAD KA BADAN YAHAY - ILAALIN DOONAA ... ... WAA MAXAY ALL. WAA MAXAY BARNAAMIJKA WAXAA LOO ILAALI LEEYAHAY IYO QIIMEYNTA ISKUULKA ISTICMAALKA ISTICMAALKA SHAQADA.
SHAQADA MAXAY TAHAY WAA MAXAY SUUQ BARNAAMIJYADA WAA MAXAY BARNAAMIJKA AAD AH EE BARASHADA
hello waa barnaamijkan aan jecelahay waxaad samayn kartaa waxyaabo badan oo aan u baahanahay waxaanan rabaa inaan heysto oo aan isticmaalo
fadlan ha ogaanin sida loo soo dejiyo autocad Waxaan jeclaan lahaa inaad soo dejiso sida download
kuma talin karno burcad-badeednimada software, shuruucda boggaan ... waxaan kor u qaadnaa habka aan u samayneyno xisaabta jaamacadda, ama iyada oo la adeegsan karo si toos ah oo loo ogolaado AutoDesk.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad soo dejiso ... Rapidshare iyo aaladahaas ayaa u heellan arrintaas, kaliya waa inaad ku qortaa Google «deg deg deg deg ah soo degso AutoCAD 2009» oo waxaad ku sii wadaysaa halistaada.
Carolina isagu wuxuu leeyahay:
hello, waa wax cajiib ah in aan leenahay autocad 2009 ka soo venezuela, fadlan, waad ii soo diri kartaa, WAXAAN KA HELI KARAA WAXQABADKA.
FADLAN SANDUU KU NOOL
WAXAAN KA HELI KARAA
IYO NESESITANDO MUCHO
Waxaan rabaa in aan tago autocad 2009 oo ah inaan u sameeyo f
yo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan soo dejiyo
sergio hiriart isagu wuxuu leeyahay:
22 / julio / 2008 Waxaan jeclaan lahaa inaan barto AutoCad 2009, waxaan u maleynayaa in ay fududeyn doonto shaqadayda, mahadsanid.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u soo dejisan karo barnaamijka autocad14. Waad ku mahadsan tahay
waalan isagu wuxuu leeyahay:
analia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aad uga baxday?
Eduardo Pacheco isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto AutoCad 2009, waxaan u maleynayaa in ay fududeyn doonto shaqadayda, mahadsanid.
omar restrepo isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay khabiir adeegaha madaniga ah laakiin waxaan diiradda saarayaa shaqadayda dhismayaasha birta iyo dareeraha cadaadiska sare ee fuuqbaxa, fadlan waxaan u baahanahay cunaha autocad
Waxaan ubaahanahay autocad
Waxaan u isticmaali karaa autocad 2004 laakiin waxaan rabaa inaan bilaabo isticmaalka Autocad 2009 si aan uga hor tago naqshadeynta
Martha SP isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa koorso asaasi ah oo ah autocad BILAASH oo si sax ah u shaqeeya oo gacanta igu qaadaya, si aad iiga badan u barato CAD, Hambalyo u yeelo fursadahaaga kala duwan.
Joogi waayeelka isagu wuxuu leeyahay:
Aad ayaan u jeclaan lahaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan autocad 2006, tan iyo markii aan ahay naqshad sawir leh oo la shaqeeya cad
Morela isagu wuxuu leeyahay:
Salaan anigu maan kala soo bixi karin baabuurka cad '2009'.
maxaan samayn karaa
mmm, waa inuu u ordaa sidii barnaamij kasta oo kale oo la rakibay. Waxay noqon kartaa in markii la soo dejinayo uusan gabi ahaanba hoos u dhicin ... hal ikhtiyaar waa in mar labaad la soo dejiyo.
Sandra maritza perez isagu wuxuu leeyahay:
Waan ku mahadsanahay inaad ii soo dirto, waxaanan u maleynayaa inay aad u muhiim tahay in la helo macluumaadkan; laakiin dhib yar ayaan helay tan iyo markii aan ku soo dejiyey kombuyutarkeyga, laakiin ma furi karay. Waxay iiga talin karaan sida loo furo ama u soo dejiyo sababta oo ah waxaan sameeyay qalad.
Car0405 isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan, laakiin waxaan u baahanahay barnaamij autocad ah oo cusub oo cusub tan iyo markii aan ogaado waxa autocad yahay
Felix isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan waxaan xiiseeyaa barashada Autocad, Anigu waxaan ahay arday ka mid ah naqshadaha oo waxaan ahaa diray inuu ku sameeyo shaqo ka ah qorshaha ka mid ah guri ku yaal 2D iyo 3D laakiin aan sida loo sameeyo haddii aan caawin kara inaan jecelahay in haddii aan mail diyaarad aan soo diri kartaa guri iyo sharax ii talaabo talaabo inaan jecelahay in aad ku mahadsantahay inaad fiiro, waxaana rajeynayaa runtii waxaan kaa caawin kara oo dhan oo naga mid ah marka aan bilaabay waa si aan waxba waxaynu og nahay iyo sida aan horay u socdo waxaan ka baranaynaa iyo waxaan rabnaa in aan dadka kale laakiin aniga kiiskeyga waa wadaagaan conocimmientos our dhab ahaantii u baahan tahay caawimaad mahad
chrstian Navarro M. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan oo u roon kuwa doonaya in ay wax ka bartaan kuwa aan ku jiro
Raúl A. isagu wuxuu leeyahay:
AUTOCAD waa barnaamij aan caadi ahayn oo way mudan tahay in xiiso badan loo qabo barashada. Laakiin waxaan soo jeedinayaa inay qaar waliba waqti yar ku lumiyaan higgaadinta hufan: kuma qori kartid leh "naxdin" badan ...
suheidy .c isagu wuxuu leeyahay:
hello waxaan jeclaan lahaa inaan helo nooca cusub auctocad
Hello Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida loo yaqaan "AutoCAD"
Awood! Waxaan ku dhuftay URL si khalad ah. waa http://www.anonymizer.com Waxa i hartay "n". Waan ka xumahay
manuel federico muñoz v isagu wuxuu leeyahay:
AUTOCAD waa mid aad u muhiim ah oo mahad waayo shaqadayda barbaro barnaamijka sayniska. Waxaan rabaa inaan codsado aan graficaciones dhaqanka for barista iyo barashada xisaabta. waxbaridda xisaabta in sagaal, qarniyo labaatanaad, bedelay sustancialemente. Tani waa in ay graficaba inay tijaabiso hadii si fiican loo xalliyo dhibaatada xisaabta iyo wax kale. Laakiin, waxaan u maleynayaa sida macallimiintii hore ee xisaabta in aad ku bilaabi kartid xisaabta xisaabta, ama sawirada jumlada, soo jeedinta ama fikradaha ka hor inta aan la shaacinin qaababka xisaabeed. Waayo, shaqo this waxaan qaatay farsamooyinka qaar ka mid ah graficaciones iyadoo ay kaalmo ka mid ah AUTOCAD. Waxaan rajeynayaa in qaar ka mid ah talooyinka laga soo qaato xirfadlayaasha ku jira meeshan
ugu badnaan - waxaan jeclaan lahaa inaan soo dejiyo tan
Wow, ma aanan ogeyn: O
Waxay ku safri karaan iyagoo isticmaalaya isticmaalka "Annonymizer" ( http://www.annonymizer.com ). Siyaabahan oo kale, markasta, had iyo jeer, ip waxaad ka noqon doontaa bixiyaha Mareykanka. Waxaan soo dejiyey autocad 2009 inta ay ku sugnaayeen Mexico, jannadii budhcad badeedda. 😆
farriin isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan soo iibsado autocad 9
EDEN SANCHEZ PEREZ isagu wuxuu leeyahay:
WAA MAXAY TAHAY IN AAD KA CIYAARIN KARTAA DIYAAR CIIDAMADA AH
hagid isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto barnaamijkan, waxaan jeclaan lahaa haddii aad iigu soo diri karto waxbarashooyin fiidiyoow ee AUTO CAD
jose corvalan isagu wuxuu leeyahay:
emaylkaygu wuxuu ku dhammaanayaa «DI» oo macnaheedu yahay sawir-gacmeedka kumbuyuutarka, waxaan la shaqeynayaa 2007 oo aan si daacadnimo ah u doonayaa inaan ku sii gudbo, taasina waa sababta aan ugu baahanahay inaan soo dejiyo Autocad 2009 iyo dhammaan nolosheeda.
Waa hagaag, aan aragno waxa cusub ee ku jira qalabkani iyo waxa run ahaantii fududeynaya shaqada.
xayawaanka isagu wuxuu leeyahay:
sida aan u soo dejinayo mmmmmm
Fiiri, waxaan fahamsanahay waxa xiisaha leh waa in emailkaaga ku dhammaato .edu
sidaas darteed iskuday oo na sheeg
Jesenia Lucia Castellon M isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan aad u xiiseynayaa helitaanka barnaamijka, laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii aysan jirin xayiraad ku saabsan koontada jaamacadda, taas oo ah, haddii ay dalbato dal kasta, sababtoo ah waxaan ka socdaa Nicaragua
Waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii xisaabta jaamacadda aysan lahayn xaddidaad, taas oo ah, haddii ay ka iman karto waddan kasta, waxaan ka socdaa Nicaragua
RAMON ANTONIO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka mahadcelinayaa gaarsiinta sifooyinka cusub ee version AutoCAD 2009 ee Isbanishka.
Juan Luis isagu wuxuu leeyahay:
Huuy colley of the architecture Waxaan akhriyey comments aad ee autocad 2009 iyo waxaan jeclaan lahaa in aan haysto nuqul ah tan iyo markii aan jeclahay naqshadda iyo ma heysto raaxada dhaqaale si ay u helaan mahad
Ricardo Cano isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kugula talinayaa dadka leh rabitaan jimicsi xirfad leh.
Waa barnaamij loogu talagalay dhuxusha horumarin ka wanaagsan, sababtoo ah barnaamijkan ayaan ku fiicnaaday dhinaca xirfadlaha sababtoo ah bentages ay bixiso.
ivan quispe isagu wuxuu leeyahay:
super waan ku talinayaa
ferran isagu wuxuu leeyahay:
????????????????????????????????????????? ma fahmin?
WAXYAABAHA LUQADAHA, WAXAAD TAHAY IN LIISO
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto sida loo isticmaalo illaa saddex cabbir
Laga yaabee qof inuu iila talin karo mowduucan.
Greace isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaad u soo dejisanaysaa ??????????
Waan fiicanahay laakiin waxaan rabaa inaan ogaado sida loo soo dejiyo
absalon bernardo isagu wuxuu leeyahay:
hello sidee ayaad tahay, si fiican ayaan ahay nin dhalinyaro ah oo raba inuu barto wax badan, waxaan i weydiin lahaa inaan iigu soo diro autocad.
Waxaan u mahadcelinayaa naxariistooda.
haddii aan soo dejisan karo qaybtaas ma saameynayso mid ka mid ah oo aan hore u soo dejiyey 2008 ...?
Hadda mar la soo dajiyay ... .. waxa uu sii socdaa:
Waqti intee le'eg ayaan haystaa?
Miyuu joogtada yahay?
Haddii kale, maxaan sameeyaa si aan u sameeyo?
liiska isagu wuxuu leeyahay:
haddii ay tahay mid xiiso leh, laakiin sidee baan u soo dejin karaa kombiyuutarkayga?
haddii ay tahay mid xiiso leh, laakiin sidee baan hoos ugu dhigi karaa?
entercom isagu wuxuu leeyahay:
Hello, fadlan qof ayaa iga caawin kara sidii loo soo dejin lahaa autocad qiimeyn cusub, waad iga caawin kartaa mahadsanid.
MIRKO isagu wuxuu leeyahay:
taas oo buuxda
Alejandro Mendoza isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa cajiib, laakiin waxaan rabaa inaan ogaado sida loo soo dejisan karo noocan ah haddii ay suurtagal tahay i soo diri macluumaadka mahadsan ...
fadlan ii ogolow aniga wararkii ugu dambeeyay ee Autocad Waxaan ahay injineer rayid cd obregon sonora mexico
jose diaz heredia (Bolivia) isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan weydiin karaa yaa iigu soo diri kara email-ka 2009 iyo fiidiyowga barashada.
marlon marenco isagu wuxuu leeyahay:
magaaladayda si aad u ahaato meel aad u adag oo aan heleyno barnaamijyada noocan ah, waxaan rajeynayaa in maalinnimada aad iigu ogolaan doonto inaan ogaado badeecada, sababtoo ah waxay tahay mid aad u hooseeysa ma iibsan karo
nadiif ah isagu wuxuu leeyahay:
aad u xiiso leh inaad barato waxyaabo cusub
Elkin martinez mora isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay khabiir ku takhasusay dhismaha madaniga ah, laakiin ma awoodin inaan kaxeeyo baska waxaanan u maleynayaa inay aad u muhiim tahay oo xiiso badan tahay barashada.
Waxaan rajeynayaa inay talo ku siin doonaan ama sharaxayaan sida aan u sameeyo si aan u helo barnaamijka.
juan jose isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahnahay autocad-ka ugu dambeyn fadlan fadlan
Inyigo isagu wuxuu leeyahay:
Si aad u awooddo in aad soo dejiso barnaamijyada noocan oo kale ah oo isku daya in aan isku xirno Maraykanka, waa in aan soo dejinnaa barnaamijka soo socda ee Windows iyo wax kasta oo aan dhibaato lahayn. kulkulul Shield
OSCAR PINEDA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAD KU HELI KARAA MACLUUMAAD AYAA LAGA HELI KARTAA WAXAAN KA HELI KARAA WAXQABADKA
CLAUDIO MUGUEL isagu wuxuu leeyahay:
BARNAAMIJKA WAA MAXAY KA QAADASHADA QAABKA?
WAA MAXAY ..................
LUIS ANGEL isagu wuxuu leeyahay:
waa mid aad u wanaagsan, laakiin sidee baan u soo dejisan karaa qaybta qiimeynta ama iskuday ... fadlan u soo dir farriin email ah ... Waxaan u mahadcelinayaa ...